Simannaa ABO’f taasifamuuf poolisiin qophii taasisuu ibse – Fana Broadcasting Corporate
Simannaa ABO’f taasifamuuf poolisiin qophii taasisuu ibse
Finfinnee, Fulbaana 3,2011 (FBC)- Fulbaana 5,2011 simannaan jila Adda Bilisummaa Oromoof Finfinneetti taasifamuu nagaan akka xumuramuuf qophii godhamuu Komishiniin Komishinaraa Jeneraalaa Poolisii Federaalaa Zeeynuu Jamaal beeksisaniiru.
Komishinarichi ibsa kennaniin, Finfinnee iddoo tokko tokkotti dargaggoota alaabaa ABO fannisanii fi dargaggoota magaalichaa gidduutti walitti bu’iinsi umamee jira jedhaniiru.
Dargaggoonni magaalichaa dargaggoota alaabaa ABO qabatanii bahan dhorkuu mirga tokkollee hin qaban jechuun,dargaggoonni alaabaa dhaaban haalluu daandii fi bu’uuraalee misooma irratti dibuu irraa of qusachuu qabu jedhaniiru.
Konkolaataa cabsuun,dhagaa darbachuufi boba’aa qabachuun buufata poolisii gubuuf sochiin taasifamaa waan jiruuf poolisiin seera qabachiisuf kan hojjetu ta’uu ibsaniiru.
Asxaa qabatanii bahuu poolisiin hin dhorkine, namni kamuu asxaa fedhe qabatee hanga karaa seeran socha’etti mirga guutuu qabaachuu Komishinarichi dubbataniiru.
Siamannaan jila ABO’f Sanbata xiqqaa taasifamu nagaan akka xumuramu qophiin taasifamuu ibsaniiru.